कर्णालीमा बैंकहरुले लगानी बढाउनु पर्‍यो : अर्थमन्त्री - Digital Khabar
कर्णालीमा बैंकहरुले लगानी बढाउनु पर्‍यो : अर्थमन्त्री
०४ भदौ, काठमाडौँ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कर्णाली प्रदेशमा बैंकहरुले लगानी बढाउनु पर्ने बताएका छन् । यो प्रदेशमा बहुआयामिक गरिबीको दर सबैभन्दा बढी रहेको भन्दै उनले कर्णाली प्रदेशको विकास बीना समग्र राष्ट्रको गरिबी अन्त्य नहुने बताए । सोहीकारण त्यसतर्फ लगानी बढाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई उनले आग्रह गरे ।
कर्णाली प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले विहीवार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कर्णाली प्रदेशमा प्रत्येक घर स्वरोजगार कार्यक्रम’ विषयक अन्तरक्रियामा मन्त्री शर्माले कर्णाली, सुदुरपश्चिम र प्रदेश नं. २ को गरिबी अन्त्य नगरी राष्ट्रको गरिबी अन्त्य नहुने उल्लेख गरे । कर्णालीको गरिबी अन्त्य गर्ने कार्यक्रम प्रदेशको कार्यक्रम नभई राष्ट्रिय कार्यक्रम भएको उनको भनाई छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको सन २०१९ सम्मको तथ्याङ्क अनुसार कर्णाली प्रदेशमा बहुआयामिक गरिबी दर ३९.५ प्रतिशत रहेको छ । यस्तै सुदुरपश्चिम प्रदेशमा २५.५ प्रतिशत र प्रदेश नं. २ मा बहुआयामिक गरिबी दर २४.५ प्रतिशत रहेको छ ।
मन्त्री शर्माले किसानको मेलामा गएर ऋण बाँड्ने र खलोमा गएर असुल गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने बताए । कर्णाली प्रदेश सरकारले अघि सारेको ‘प्रत्येक घर स्वरोजगार कार्यक्रम’ को सही कार्यान्वयन भए पाँचदेखि ७ वर्षभित्र गरिबी अन्त्य हुने विश्वास समेत उनले व्यक्त गरे । कणर्ालीबाट सुरु भएको यो अभियान अन्य ठाँउमा पनि विस्तार भई गरिबी अन्त्य गर्ने लक्ष्य प्राप्त हुने मन्त्री शर्माको भनाई छ ।
पूर्वमन्त्री शक्ति बस्नेतले देश विकासको लागि र लगानीकर्ताहरुको नाफाको लागि कर्णाली प्रदेश ‘भर्जिन ल्याण्ड’ भएकोले ढुक्क भएर लगानी गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई आग्रह गरे । ठूलो भूगोल र प्रशस्त साधन स्रोत भएको कणर्ालीमा गरिएको लगानीको राम्रो प्रतिफल प्राप्त हुने उनले बताए ।
कणर्ाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री गोपाल शर्माले ‘प्रत्येक घर स्वरोजगार कार्यक्रम’ गरिबीमा डुबेका त्यहाँका जनतालाई हात समातेर माथि उठाउने कार्यक्रम भएकोले त्यसमा हातेमालो गर्न बैंकहरुलाई आग्रह गरे । सोही मन्त्रालयका सचिव चक्र बहादुर बुढाले ‘ कर्णाली प्रदेशमा प्रत्येक घर स्वरोजगार कार्यक्रम’ बारे प्रस्तुति दिएका थिए ।
बलात्कारपछि हत्याको आरोपमा शव बुझ्नअस्वीकार